Ithegi: Uhlalutyo lwedatha | Martech Zone
Ithegi: Uhlalutyo lwedatha
NgoLwesibini, Agasti 25, 2015 NgeCawa, Agasti 30, 2015 UJenn Lisak Golding
Njengabathengisi, sihlala sizama ukuqokelela ulwazi malunga nokuziphatha kwabathengi bethu. Nokuba kungokuhlalutya uGoogle Analytics okanye ujonge iipateni zokuguqula, kusathatha ixesha elininzi kuthi ukuba sihambe kwezi ngxelo kwaye senze ulungelelwaniso ngqo lokuqonda okusebenzayo. Kutshanje ndiye ndafunda ngeBoomtrain nge-LinkedIn, kwaye yandinika umdla. I-Boomtrain inceda uphawu olungcono lokunxibelelana nabasebenzisi babo ngokuhambisa i-1: 1 ngamava awodwa aqhuba ukubandakanyeka okunzulu, ukugcinwa okukhulu,
Iindleko zabantu zoHlahlelo lweDatha
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 7, 2012 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 7, 2012 Douglas Karr
Alithandabuzeki elokuba uhlalutyo lwedatha lunembuyekezo emangalisayo kutyalo-mali… kodwa ngaphandle kwezixhobo eziyimfuneko, izinto zibiza ngokukhawuleza. Besisenza igama eliphambili nohlalutyo lokhuphiswano komnye wabathengi bethu ngaphezulu kweeveki ezi-3 ngoku-ukudibanisa itoni yedatha, ngaphezulu kwamagama aphambili ayi-100,000, kunye nokubeka phambili ngesandla. Kuyabiza kwaye sihlala sikhangela isixhobo esilandelayo se-BI ukusinceda sinciphise ixesha kunye neendleko zokwenza ingxelo. Ukusuka kwi-infographic:
NgoMvulo, nge-14 kaJanuwari, 2008 NgoLwesine, Novemba 22, 2012 Douglas Karr
Sineenkqubo ezininzi zokubeka iliso emsebenzini eziqhuba iinkqubo rhoqo. Abanye babaleka umzuzu ngamnye, abanye kanye ngobusuku kuxhomekeke kwinto abayenzayo. Umzekelo, sinokuqhuba iskripthi esithumela ngaphandle kubo bonke abathengi abangakhange bathenge kwiintsuku ezingama-30 ukubathumela isigqebhezana. Endaweni yokuzama ukugcina umkhondo wazo zonke ezi zinto ngesandla, kulula kakhulu ukwakha imisebenzi ecwangciswe ngokuzenzekelayo kwaye